Munamato wekudzikamisa uye Kuudza Munhu. ? (Hasha uye Hasha)
Munamato wekudzikamisa nekusimbisa munhu Izvo zvakakosha sezvo isu tisingazive pane inguva yapi yatinogona kuve nechido chekuzviita.
Nguva zhinji tinofamba famba kana tiri nemhuri uye tinowana mamiriro ezvinhu atinoda kudzikamisa mumwe munhu anoshandurwa kana anongoenda aripakati pekunamata mune yemweya uko munyengetero ndiyo chete chiyero chinogona kuiswa kumusimbisa, nekuti Ndipo apo munamato uyu unova wakakosha.
Izvo hazvina basa kana ari mutorwa, minamato Ivo vane simba kwazvo uye vanogona kuitwa chero kupi.
Iva kwatinogara munamato unogona kuve chombo chedu choga chatinogona kushandisa chero isu paine kutenda.
1 1) Munamato wekusimbisa munhu ane hasha
2 2) Munamato wekusimbisa munhu akatsamwa
3 3) Munamato wekudzora kushungurudzika uye kutsamwa kwevaviri ava
4 4) Munamato wekudzikisira munhu unotsamwisa
4.1 Ndirini pandingaite minamato?
1) Munamato wekusimbisa munhu ane hasha
“Ishe wangu, mweya wangu unotambudzika; kushungurudzika, kutya, uye kutya zvinondibata.
Ndinoziva izvi zvinoitika nekuda kwekushaya kwangu kwekutenda, kushayikwa kwekusiiwa mumaoko enyu matsvene uye kusanyatsovimba nesimba renyu infinito. Ndiregererewo Tenzi uye wedzera kutenda kwangu. Usatarise kutambudzika kwangu uye kuzvifunga kwangu.
Ndinoziva kuti ndinotya, nekuti ini ndinoomerera, nekuda kwekusuwa kwangu, pakuramba ndichiverenga pamatambudziko angu anosiririsa, nemaitiro angu uye zviwanikwa zvangu. Ndiregererei, Ishe, uye ndiponesei, oh Mwari wangu.
Ndipeiwo nyasha yekutenda, Ishe; Zvinondipa nyasha kuvimba naIshe pasina zviyero, ndisingatarise njodzi, asi ndichitarisa pauri chete, Ishe; Ndibatsire, o Mwari!
Ndinonzwa ndoga uye ndakasiyiwa, uye hakuna mumwe angandibatsira, kunze kwaIshe.
Ndinozvisiya mumaoko ako, Ishe, mavari ndinoisa itsvo dzehupenyu hwangu, gwara rekufamba kwangu, uye ndinosiya zvibodzwa mumaoko enyu. Ndinotenda mamuri Ishe, asi wedzerai kutenda kwangu.
Ndinoziva kuti Ishe akamuka anofamba padivi pangu, asi saizvozvowo ndinotya, nekuti handikwanise kuzvisiya zvachose mumaoko Ako. Ndibatsirei kushaya simba, Ishe.
Munamato uyu wekudzikamisa nekusimbisa munhu une simba chaizvo!
Munguva dzino zvinogona kujairika kuona vanhu vachishatirwa Ivo vanoita kunge vakamirira chero mamiriro ezvinhu kuti aputika mukutsamwa.
Zvirokwazvo takasangana nemamiriro ezvinhu apo kushatirwa kunogona kuoneka sekutyisidzira kwehupenyu hwedu kana kune vamwe vanhu vakatikomberedza uye mune idzo nhambo apo munamato unova utiziro hwakakwana uko hukasha husina chikamu.
2) Munamato wekusimbisa munhu akatsamwa
Anesimba mukuru wemauto aIshe
Iwe wakunda zvakaipa kazhinji
Uye uchairova pese paunoda
Ibvai kwandiri zvakaipa zvese
Muvengi wese anoedza kupikisa kutendeka kwangu
Uye nyaradza avo vanoramba vari muhupenyu hwangu
Vape rugare uye dzikama
Varatidze nzira yekuenda
Hasha ndeimwe yemanzwiro atinoita isu vanhu uye ayo akaoma kudzora, kunyanya munguva dziya dzehasha uko isu hatibvunze zvatinoita kana zvatinotaura.
Tinogona kuvhenekwa vanhu vakatsamwa nguva zhinji uye kuti kutsamwa kunogona kuputika chero nguva, pasina isu kuzviona zvichiuya uye pasina kugona kuita chero chinhu kudzivirira.
Nekudaro, kana tave neruzivo rwenyika rwemweya rwakatikomberedza, tinogona kutonga pamusoro pemamiriro ezvinhu aya nekungosimudza mutsara. Iye munhu anonzwa kutsamwa anogona kunzwa mumuviri wake kuti zvese zvirikuitika sei uye ndiMwari anotanga kutora kutonga kwezviito zvake kuti kutsamwa hakusati kuchimutonga.
3) Munamato wekudzora kushungurudzika uye kutsamwa kwevaviri ava
«Vatumwa vanodiwa, vekudenga, vekudenga uye vane masimba zvisikwa nebasa raMwari
Iwe uri rudo uye unopa rudo
Vakazvarwa kuti vaite basa ravo uye kusvika zvino havana kukundikana
Ndibatsireiwo kukunda dambudziko iri.
Ndibatsireiwo kuti anondinzwisisa
Nzwisisa matambudziko angu, kuti ini ndinzwisise ako
Nzwisisa kutambudzika kwangu, kuti unzwisise zvako
Rega apinde uye ataure neni, kuti ndipe uye ndimude
Batsirai kukunda dambudziko iri rakakura
Vatumwa vanodiwa, imi muri chiedza changu
Gwara rangu, uye tariro yangu
Ndimi mhinduro yangu«
Munamato uyu wekudzikisira kushungurudzika pamwe nekutsamwa kwevaviri ava unogona kushandiswa nguva dzese uye mamiriro.
Semuenzaniso, munhu arikurwara zvakanyanya nekurwadziwa kwemweya kana mweya anogona kudzikama mushure mekugamuchira mumwe weminamato iyi.
Rangarira kuti munguva dzekushungurudzika kana muviri wemunhu nepfungwa zvichikanganiswa nenzira isingawanzo, munamato chinhu chatinogona kushandisa uye chatinoziva kushanda nguva dzese nenzvimbo.
4) Munamato wekudzikisira munhu unotsamwisa
«Ishe vanodikanwa, ndinoisa kutsamwa uye kuvava kwandinowanzo gara mumoyo mangu patsoka dzenyu uye ndinonamata kuti munyasha dzenyu mufumure zvese zviri kukonzera muchetura unorwadza unogara mumoyo mangu kazhinji pamusoro, Uye wakasununguka ini kubva pairi
Ishe, ndinoreurura hasha dzangu dzose neshungu dzangu uye ndoziva kuti kana ndikabvumidza izvi kuti zviratidzike mumoyo mangu, zvinopwanya chirairo chatinacho pamwechete.
Ndinoziva kuti kana ndichireurura kutsamwa kwangu, makatendeka uye mune mhosva yekuregerera kunze kwehasha mukati memoyo wangu uye nekundinatsa kubva pane zvakaipa zvese, zvandirumbidza zita renyu.
Asi, Ishe, ndinoshuva kuti musunungure kubva mukusvibiswa kwemukati memoyo wangu kuti mudzi wekutsamwa utisiye mukati, uye ndinokukumbira kuti undiongorore ubudise zvese zvisina kufadza meso ako.
Ndatenda muzita raJesu,
Nguva zhinji kushushikana kwezuva nezuva kunoungana mumuviri nemweya kusvika chinguva chasvika icho chinoita senge chakapfuura miganhu uye zvese zvinoputika, isu tinotadza kuzvidzora isu pachedu uye tinokwanisa kuita chero hupenga.
Pakati peaya nguva minamato yakakosha nekuti tinokwanisa kuishandisa panguva iyo yatinoida uye zvisinei nekuti ndiani akatipota. Minamato zvishandiso zvemweya zvinogara zviripo kwatiri.
Ndirini pandingaite minamato?
Minamato zvinogona kuitwa chero pazvinenge zvichida.
Kune avo vanowanzoisa parutivi nhamba yakakosha yezuva nezuva yekunyengetera, asi mune idzi zviitiko panodiwa minamato, ivo vanogona kuitwa sezvo vachive ivo chete chishandiso chedu chatinogona kushandisa
Tinogona kunamatira mumhuri kana kubasa neshamwari, asi zvakanaka kuva nechinguva chega kuti tinamate nekuti ndipo panosvinwa nemoyo wedu pamberi pekuponeswa kwaIshe uye tinogona kutaura naye.
Izvo hazvina basa kana isu tiri kushandisa makenduru, kana isu tichiridza imwe yakapfava kana yemweya mimhanzi, isu tinozviita chinyararire kana zvinonzwika, chakakosha ndechekuti munamato uve chaiwo, kubva mukudzika kwemoyo wedu uye uitwe nekutenda, kuziva kuti Mwari ari kutiteerera uye anoda kupindura zvatiri kukumbira.
Tora mukana wesimba re munamato wekudzikamisa nekusimbisa munhu. Gara naMwari
Simba munamato kuti wangu ex adzoke
Munamato wekutengesa imba